परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु | अंश २९४ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्‍वरको कार्यको उद्देश्य नबुझ्ने व्यक्ति भनेकै उहाँको विरोध गर्ने व्यक्ति हो र परमेश्‍वरको कार्यको उद्देश्य बुझिसकेर पनि परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न नखोज्ने व्यक्तिलाई अझ बढी विरोधी मान्नुपर्छ। भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभरि नै वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन् तर तिनीहरूमध्ये एक जनाले पनि परमेश्‍वरको कार्यको उद्देश्य बुझेका हुँदैनन्। तिनीहरूमध्ये एक जना पनि परमेश्‍वरलाई जान्न सक्षम छैन, तिनीहरूमध्ये कोही परमेश्‍वरको इच्छामा एकचित्त हुने बारेमा त कुरै नगरौं। तिनीहरू सबै जना परमेश्‍वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थका, दुष्ट मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरको ध्वजा बोके तापनि जानीबुझीकनै परमेश्‍वरको विरोध गर्छन्। परमेश्‍वरमा विश्‍वास भएको दाबी गर्दै तिनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन्। त्यस्ता सबै मानिसहरू मान्छेको आत्मा विनाश गर्ने दियाबलसहरूको मालिक हो, सही मार्गमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिहरूको बाटोमा जानाजान आउने दुष्टात्माहरू हुन्, र परमेश्‍वरको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवरोध गर्ने बाधाअड्चनहरू हुन्। तिनीहरू “स्वस्थ विधान” का जस्तो लाग्न सक्छन् तर ‍तिनीहरू मानिसहरूलाई परमेश्‍वर विरुद्ध उभिन अगुवाइ गर्ने ख्रीष्ट विरोधीहरू बाहेक केही होइनन् भन्ने कुरा कसरी तिनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन्? तिनीहरू मानव आत्मा विनाश गर्नमा समर्पित जीवित शैतानहरू हुन् भन्ने कुरा कसरी तिनीहरूका अनुयायीहरूले थाहा पाउन सक्छन्? परमेश्‍वरको उपस्थितिमा आफूलाई उच्च सम्मान गर्ने व्यक्तिहरू नै सबैभन्दा नीच मान्छेहरू हुन् भने आफूलाई विनम्रताका साथ पेश गर्नेहरू सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तिहरू हुन्। अनि परमेश्‍वरको कामको बारेमा जान्दछु भनी ठान्नेहरू र अझ भन्ने हो भने उहाँलाई सोझै हेर्दै अन्य मानिसहरूमाझ ठूलै तामझामको साथमा परमेश्‍वरको कामको बारेमा घोषणा गर्न सक्षम छु भनी ठान्नेहरू सबैभन्दा अज्ञानी मान्छेहरू हुन्। त्यस्ता मान्छेहरूसँग परमेश्‍वरको गवाही हुँदैन, तिनीहरू घमण्डी र अहङ्कारले भरिएका हुन्छन्। परमेश्‍वरको बारेमा वास्तविक अनुभव र व्यवहारिक ज्ञान हुँदाहुँदै पनि आफूसँग उहाँको बारेमा एकदमै कम मात्र ज्ञान छ भनी विश्‍वास गर्नेहरू नै उहाँद्वारा सबैभन्दा बढी प्रेम गरिने व्यक्तिहरू हुन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग मात्र वास्तवमै परमेश्‍वरको गवाही हुन्छ र तिनीहरू मात्र वास्तवमै परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पार्न सकिने हुन्छन्। परमेश्‍वरको इच्छा नबुझ्नेहरू परमेश्‍वरका विरोधीहरू हुन्; परमेश्‍वरको इच्छा बुझेर पनि सत्यको अभ्यास नगर्नेहरू परमेश्‍वरका विरोधीहरू हुन्; परमेश्‍वरका वचनहरू खाने-पिउने गरे पनि परमेश्‍वरका वचनहरूको सारको विरुद्ध जानेहरू परमेश्‍वरका विरोधीहरू हुन्; देहधारी परमेश्‍वरको बारेमा धारणा भएका साथै विद्रोहमा संलग्न हुने मन भएकाहरू परमेश्‍वरका विरोधीहरू हुन्; परमेश्‍वरको निन्दा गर्नेहरू परमेश्‍वरका विरोधीहरू हुन्; र परमेश्‍वरको बारेमा जान्न नसक्ने वा उहाँको साक्षी बन्न नसक्ने जोकोही परमेश्‍वरको विरोधी हो। त्यसैले म तिमीहरूलाई आग्रह गर्छु: यदि तिमीहरूलाई साँच्चै नै यो मार्गमा हिँड्न सक्छु भन्ने विश्‍वास लाग्छ भने निरन्तर यहीँ बाटो पछ्याइराख। तर यदी तिमीहरूले परमेश्‍वरको विरोध गर्नबाट आफूलाई रोक्न सक्‍दैनौ भने तिमीहरू धेरै ढिलो हुनुअगावै अन्यत्र लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ। अन्यथा, तिमीहरूको लागि स्थिति नराम्रो हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ, किनभने तिमीहरूको स्वभाव अति भ्रष्ट छ। बफादारीता वा आज्ञापालन, धार्मिकता वा सत्य चाहना गर्ने हृदय, वा परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम त तिमीहरूसँग थोपै छैन। परमेश्‍वरको अगाडि तिमीहरूको परिस्थिति पूर्ण रूपमा कवाडखानाको जस्तो छ भनेर भन्न सकिन्छ। आफूले पालना गर्नुपर्ने कुरा पालना गर्न तिमीहरू सक्दैनौ र भन्नुपर्ने कुराहरू भन्न सक्दैनौ। तिमीहरूले जुन कुरालाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्थ्यो, सो कुरालाई अभ्यासमा ल्याउन तिमीहरू चुकेका छौ; अनि जुन कार्य तिमीहरूले पूरा गर्नुपर्थ्यो, सो कार्य पूरा गर्न तिमीहरू असक्षम भएका छौ। तिमीहरूसँग हुनुपर्ने बफादारीता, विवेक, आज्ञाकारिता, वा संकल्प तिमीहरूमा छैन। कष्ट सहन गर्नु तिमीहरूको उत्तरदायित्व भए पनि तिमीहरूले त्यस्तो कष्ट सहन गरेका छैनौ र तिमीहरूमा हुनुपर्ने विश्‍वास तिमीहरूसँग छैन। एकदमै सरल रूपमा भन्दा, तिमीहरू पूर्ण रूपमा गुणविहीन छौ: तिमीहरूलाई बाँचिराख्न लाज लाग्दैन? म तिमीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, कि तिमीहरूले अनन्त विश्रामको लागि आँखा चिम्लनु उत्तम हुन्छ, जसबाट परमेश्‍वर तिमीहरूको खाताको बारेमा चिन्ता गर्न वा तिमीहरूको लागि कष्ट सहन गर्नबाट बच्नुहुनेछ। तिमीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छौ तैपनि तिमीहरूलाई उहाँको इच्छाको बारेमा थाहा छैन; तिमीहरू परमेश्‍वरका वचनहरू खान्छौ-पिउँछौ तैपनि परमेश्‍वरले मान्छेले गर्नैपर्ने भनेर आवश्यक गर्नुभएका कुराहरू पालन गर्न सक्दैनौ। तिमीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छौ तैपनि तिमीहरूलाई उहाँको बारेमा थाहा छैन, अनि तिमीहरू प्रयत्न गर्नुपर्ने कुनै लक्ष्यविना नै, कुनै मू्ल्यविना नै, कुनै अर्थविना नै जिउँछौ। तिमीहरू मानव प्राणीको रूपमा जिउँछौ तैपनि तिमीहरूमा अलिकति पनि विवेक, सच्चरित्रता, वा विश्‍वसनीयता छैन—के तिमीहरू ‍अझै आफूलाई मानव प्राणी भन्न सक्छौ? तिमीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छौ तैपनि तिमीहरू उहाँलाई धोका दिन्छौ; अझ भन्ने हो भने, तिमीहरू परमेश्‍वरको पैसा लिन्छौ र उहाँको लागि चढाइएका भेटीहरू आफै खान्छौ। त्यसपछि पनि, अन्त्यमा अझै परमेश्‍वरका भावनाहरूको बारेमा अलिकति मात्र विचार गर्न वा उहाँप्रति विवेक दर्शाउन पनि चुक्छौ। तिमीहरू परमेश्‍वरले अनिवार्य गर्नुभएका कुराहरूमध्येको सबैभन्दा मामुली कुरा पनि पूरा गर्न सक्दैनौ। के तिमीहरू ‍अझै आफूलाई मानव प्राणी भन्न सक्छौ? परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई प्रदान गर्नुभएको खाना खाएर पनि र उहाँले तिमीहरूलाई दिनुभएको प्राणवायु श्‍वासप्रश्‍वास गरेर पनि, उहाँको अनुग्रह उपभोग गरेर पनि अन्त्यमा तिमीहरूसँग परमेश्‍वरको बारेमा अलिकति पनि ज्ञान छैन। यसको विपरीत, तिमीहरू परमेश्‍वरको विरोध गर्ने बिकामेहरू बनेका छौ। के त्यसले तिमीहरूलाई कुकुरभन्दा पनि नीच स्तरको जन्तु बनाउँदैन र? जनावरहरूमा, के तिमीहरूभन्दा बढी दुष्ट अन्य कुनै जनावर छ त?
उच्च प्रवचन मञ्चमा उभिएर अरूलाई पढाउने पाष्टरहरू र एल्डरहरू परमेश्‍वरका विरोधीहरू अनि शैतानका बन्धुहरू हुन्; उच्च प्रवचन मञ्चमा नउभिने अरूलाई नपढाउने तिमीहरू परमेश्‍वरका अझ ठूला विरोधीहरू हुन सक्दैनौ र? के तिमीहरू तिनीहरूभन्दा बढी शैतानसँगको गुटबन्दीमा छैनौ र? परमेश्‍वरको कार्यको उद्देश्य नबुझ्नेहरूले कसरी परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप एकचित्त हुने भन्ने बारेमा जान्दैनन्। निश्चय पनि उहाँको कार्यको उद्देश्य बुझ्नेहरूले परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप एकचित्त हुन जान्दैनन् भन्ने हुन सक्दैन। परमेश्‍वरको कार्य कहिल्यै पनि गल्तीमा हुँदैन; बरु मान्छेले गर्ने अनुसरण प्रयत्न चाहिँ त्रुटिपूर्ण हुन्छ। जानीबुझीकनै परमेश्‍वरको विरोध गर्ने ती चरित्रहीन व्यक्तिहरू पाष्टरहरू र एल्डरहरूभन्दा पनि बढी पापी र दुरासायी छैनन् र? परमेश्‍वरको विरोध गर्नेहरू धेरै छन्, तर तीमध्येमा तिनीहरूले परमेश्‍वरको विरोध गर्ने तरिकाहरू पनि धेरै छन्। सबै खाले तौरतरिका भएका विश्‍वासीहरू भए जस्तै परमेश्‍वरको विरोध गर्नेहरू पनि सबै खाले तौरतरिकाकै छन्, र तिनीहरू हरेक व्यक्ति अर्को व्यक्तिभन्दा फरक छन्। परमेश्‍वरको कार्यलाई स्पष्टसँग पहिचान गर्न नसक्ने एक जनालाई पनि बचाउन सकिँदैन। विगतमा मान्छेले जे-जसरी परमेश्‍वरको विरोध गरेको भए तापनि जब उसले परमेश्‍वरको कार्यको उद्देश्य बुझ्छ र आफ्ना प्रयत्नहरू परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्नमा समर्पित गर्छ, तब परमेश्‍वरले उसका पहिलेका सबै पापहरू पुछेर सफा पारिदिनुहुनेछ। मान्छेले जबसम्म सत्यको खोजी गरिरहन्छ र सत्यको अभ्यास गरिरहन्छ, तबसम्म परमेश्‍वरले उसले के गरेको छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहुन्न। अझ भन्ने हो भने, मान्छेले गर्ने सत्यको अभ्यासको आधारमा परमेश्‍वरले उसलाई धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ। परमेश्‍वरको धार्मिकता यही नै हो। मान्छेले परमेश्‍वरलाई देख्नुअघि वा उहाँको कार्यको अनुभव गर्नुअघि, मान्छेले परमेश्‍वरप्रति जे-जसरी कार्य गरे तापनि, उहाँले ती कुरालाई ध्यान दिनुहुन्न। तथापि, मान्छेले परमेश्‍वरलाई देखिसकेपछि वा उहाँको कार्यको अनुभव गरिसकेपछि, मान्छेले गरेका सबै काम र कार्यवाहीहरूलाई परमेश्‍वरले “इतिहास पुस्तक” मा प्रविष्ट गराउनुहुनेछ, किनभने मान्छेले परमेश्‍वरलाई देखिसक्‍नुभएको हुन्छ र उहाँको कार्यमाझ बाँचिसकेको हुन्छ।
मान्छेले परमेश्‍वरसँग के-के छन् र परमेश्‍वर के हुन् भनेर साँच्चिकै देखिसकेपछि, उसले उहाँको सर्वोच्चता देखिसकेपछि, र उसले परमेश्‍वरको कामको बारेमा साँच्चिकै थाहा पाइसकेपछि, र अझ भन्ने हो भने, मान्छेको पुरानो स्वभाव परिवर्तन भइसकेपछि, मान्छेले परमेश्‍वरको विरोध गर्ने आफ्नो विद्रोही स्वभावलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गरिसकेको हुनेछ। यो भन्न सकिन्छ कि हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै समयमा परमेश्‍वरको विरोध गरेको हुन्छ र हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै समयमा परमेश्‍वर विरुद्ध विद्रोह गरेको हुन्छ। तथापि, यदि तैँले इच्छुक भई देहधारी परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्छस् र यस समयदेखि परमेश्‍वरको हृदयलाई बफादारीताद्वारा सन्तुष्ट पार्छस् भने, तैँले अभ्यास गर्नुपर्ने सत्यको अभ्यास गर्छस् भने, तैँले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्छस् भने, र तैँले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गर्छस् भने, तँ परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न आफ्नो विद्रोही स्वभावलाई परित्याग गर्न इच्छुक र परमेश्‍वरले सिद्ध पार्न सक्‍नुहुने व्यक्ति होस्। यदि तँ ढिपी गर्दै आफ्ना गल्तीहरू हेर्न अस्वीकार गर्छस् र आफै पश्‍चाताप गर्ने कुनै इच्छा राख्दैनस् भने, परमेश्‍वरसँग सहकार्य गर्ने वा उहाँलाई सन्तुष्ट पार्ने थोरै पनि इच्छा नराखीकनै आफ्नो विद्रोही व्यवहारलाई निरन्तरता दिन्छस् भने तँ जस्तो हठी र असुधार्य व्यक्तिलाई निश्चय रूपमा सजाय हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै पनि परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध पार्न सकिने व्यक्ति हुनेछैन। यस्तो हुने हुनाले, तँ आज परमेश्‍वरको दुस्मन होस् र भोलि पनि तँ परमेश्‍वरकै दुस्मन हुनेछस्, र यसरी नै पछि पनि परमेश्‍वरको दुस्मन नै रहिरहनेछस्; तँ सदैव परमेश्‍वरको विरोधी र परमेश्‍वरको दुस्मन हुनेछस्। यस्तो अवस्थामा, सम्भवत कसरी परमेश्‍वरले तँलाई छाड्नुहुन्छ र? परमेश्‍वरको विरोध गर्नु मान्छेको प्रकृति हो, तर मान्छेले आफ्नो प्रकृति बदल्नु असम्भव छ भन्दैमा जानाजान परमेश्‍वरको विरोध गर्ने “रहस्य” को खोजी गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो अवस्था थियो भने, आफ्नो भावी सजाय कठोर नहोस् र आफ्नो पाशविक प्रकृति बाहिर आई आखिरमा परमेश्‍वरद्वारा आफ्नो देहीय शरीर समाप्त पार्नु अघिसम्म नियन्त्रण गर्नै नसकिने अवस्था नबनोस् भन्‍नका खातिर तैँले ढीला हुनुअगावै अन्यत्र लाग्नुपर्थ्यो। तैँले आशीषहरू प्राप्त गर्नलाई परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस्; तर यदि आखिरमा तँलाई दुर्भाग्य मात्रै आइलाग्यो भने, के त्यो लज्जास्पद हुँदैन र? म तिमीहरूलाई आग्रह गर्छु कि तिमीहरूले अर्को योजना बनाउनु बेस हुन्छ। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेभन्दा तिमीहरूले गर्न सक्ने अन्य जुनसुकै कुरा गर्नु बेस हुन्छ: निश्चित रूपमा बाटो यही मात्रै हो भनेर भन्‍न सकिँदैन। यदि तिमीहरूले सत्यको खोजी गरेनौ भने पनि तिमीहरू निरन्तर बाँचिरहने थिएनौ र? किन तिमीहरू परमेश्‍वरसँग यस प्रकारको मतभेदमा रहनुपर्छ र?